Banyere Anyị - China Kanaif piping Systerm Ltd
K & F dị mkpụmkpụ maka "Key na Firm", nke na-anọchite isi na nkwụsi ike. Ọ bụ ezie na ngwaahịa nke K & F bụ nanị unimpressive engineering akụkụ, ha dị oké mkpa mmiri. Dị ka a pụrụ iche na anwụrụ kwesịrị ekwesị soplaya, K & F e banyere ngwaahịa mma dị ka ya ndabere ọnọdụ maka ndụ kemgbe ya oruru ihe na-agbalịsi ike na-emepụta zuru okè ngwaahịa, si otú na-enye elu-edu anwụrụ oyiyi akwa ahịa.
K & F ozi bụ "Iji mepụta mma mmetụta nke home"! K & F na-eme na-emepe emepe ala, gburugburu ebe obibi, ike-azọpụta, mma na-adaba adaba ngwaahịa, ka enye emelitere na mma omenala na lifestyles ka ndị mmadụ nakwa dị ka ikwado puku ezinụlọ na-enwe obi ụtọ ná ndụ. Ka ọ dịgodị, K & F ga mma-akwụ ya ọrụ, mmekọ, oke n'akụ na ọha mmadụ. Otú ọ dị, K & F n'ụzọ doro anya maara na ọ bụ naanị mgbe ndị ahịa 'mmetụta nke n'ụlọ karị, nwere ike ihe enterprise ịzụlite ọma, nke mere na obi ayi, nke n'ụlọ ga-aka mma ka nke ọma!
▪Vision nke K & F-Iji a na-akwanyere ùgwù mbụ ọnụego enterprise! 1. ifịk ifịk ibido-elekọta mmadụ ọrụ dị ka nke ọma dị ka nditịm mezuo na-agbalịsi ike transcend ngwaahịa ibu, na-arụ ọrụ, gburugburu ebe obibi ibu, tax liability na na; noro site na ọchịchị nke ezi okwukwe, na-elekọta mmadụ omume ọma na azụmahịa ụkpụrụ ọma; ifịk ifịk na-arụ ọrụ ọha na eze ọdịmma N'ezie; 2. Standard oha usoro, tozuru okè na-arụ ọrụ management, magburu onwe azụmahịa arụmọrụ ma pụtara ìhè mkpara otu; na-atụ na ihe nlereanya nke Chinese ụlọ ọrụ; 3. Mepụta nke mbụ ika nke Chinese ọku akara ngwaahịa na mba a ma ama anwụrụ njikọ ika; 4. Iru mmeri-mmeri ọnọdụ yiri ọzọ: egbo ahịa, ọrụ, mmekọ, oha obodo na oke n'akụ.
▪Values ​​nke K & F-Products, ụlọ ọrụ omume ọma na àgwà. K & F kwesịrị ọ bụghị nanị na-enye ndị kasị magburu onwe ngwaahịa ndị ahịa, ma kwesịrị-adị a na-akwanyere ùgwù ụlọ ọrụ. Ọzọkwa, K & F kwesịrị inyere ya ọrụ na-enweta ike, iguzosi ike n'ezi na ihe ịga nke ọma, nke mere na ngwaahịa, ụlọ ọrụ omume ọma na àgwà ga-emekwa K & F ika, ịgbakwunye onye ọ bụla ọzọ na onye ọ bụla nwere ike a na-akụzi na. Nanị mgbe ha atọ na-akwalite onye ọ bụla ọzọ nwere ike na ozi na ọhụụ nke K & F-emezurịrị.
▪Spirit nke K & F-Nraranye, mmekota na ọmụmụ ihe. Innovative nraranye bụ ụkpụrụ omume; nraranye bụ ntọala nke lanarị; nraranye bụ ike echiche nke ibu ọrụ, entrepreneur mmụọ na echiche nke ozi; nraranye bụ ịjụ mediocrity na-achụ mma; nraranye bụ ime ihe kasị mma mgbe ị na-e nyere ihe na-agbalị ime ihe ziri ezi na ụzọ magburu onwe mgbe ị na-adịghị nyere ihe. Njikọ Aka, dị ka aha ya na-egosi, pụtara imekọ ihe ọnụ, nke na-ezo aka elu imekọ ihe ọnụ na ndị ọzọ mma imekọ ihe ọnụ. Ọmụmụ ihe bụ mkpa maka lanarị na mmepe, nke bụ ihe a chọrọ oge na isi iyi nke ọhụrụ. Ọrụ kwesịrị n'ọmụmụ ihe-ụdị individualizes, mgbe K & F ga-aghọ nke a na-amụ na-abara nzukọ. Innovation bụ na ndụ nke enterprise na isi iyi nke competitiveness nakwa dị ka ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke ọmụmụ. K & F agba ume amaghị mma na ihe ọ bụla pụrụ iche ma ebube eche echiche; K & F akwali ihe nṅomi na mbụ rụzuru. K & F ga na-ịgọnahụ onwe ya, otú ka mma gafee onwe ya.
▪Company Philosophy: 1. Style nke K & F: Rapid omume na ihe ozugbo! K & F jụ ngọpụ. A oge na ngwa ngwa ijeụkwụ, "jiri" pụtara ihe ọ bụla ọzọ ma "na-echere ọnwụ." Ya mere, ihe anyị na-ka na-eche maka? 3. Three ọzụzụ nke K & F: Ọ dịghị aghụghọ; dịghị opportunism; dịghị ịghọ aghụghọ ule na rụọ na ihe! Atọ ndị a ọzụzụ bụ atọ unbridgeable ịdọ aka ná ntị e, nke bụ ihe ndị kasị mkpa a chọrọ na ọkachamara ụkpụrụ ọma K & F si were n'ọrụ, mkpa ụkpụrụ nke àgwà na mkpa ọdịnaya nke ike n'ezi ihe. 3. Three ikpe ikpe ibiere enịmde: ma omume bara uru enterprise development; ma omume bụ eme ka azụ ahịa 'iguzosi ike n'ihe; ma omume bụ na ihu ọma nke guzozie ọdịmma nke onye ọ bụla ọzọ. 4. Echiche mode nke K & F: Anyị bụ isi iyi nke ihe niile! 5. K & F okwukwe: Anyị bụ ndị kasị mma! 6. K & F si arụ ọrụ àgwà: Ime ihe kasị mma anyị na zuru nke ahuhu! 7. K & F si otu echiche: K & F bụ otu otu na e nwere nanị "anyị", ma ọ dịghị "gị" ma ọ bụ "ha"!